ओपनसूस १२.१ उपलब्ध लिनक्सबाट
ओपनसूस १२.१ उपलब्ध
अलेक्ज्याण्डर (उर्फ KZKG ^ Gaara) | | वितरण, जीएनयू / लिनक्स, हाम्रो बारेमा
संस्करण अब डाउनलोड गर्न उपलब्ध छ १२.१ ओपनसुसे द्वारा, वितरणलाई अर्कोलाई बिदाइयो जिनोम2को नवीनता अँगाल्न जीनोम-शेल.
जस्तो तार्किक छ, यस विमोचनको पछिल्ला संस्करणहरू छन् LXDE, Xfce, केडीई y जिनोम, यद्यपि डेस्कको अन्तिम समापनमा हाइलाइट गर्न धेरै छैन। यो संस्करण खुला SUSE संयुक्त राज्य अमेरिका systemd प्रणाली स्टार्टअप को लागी, Xen 4.1.१, KVM y VirtualBox।
मलाई लाग्छ कि समाचार बढी केन्द्रित छ ownCloud, एक तरीका तपाईंको फाईलहरू अनलाइन उपलब्ध गराउन, हाम्रो उपकरणहरूको साथ समक्रमणलाई अनुमति दिँदै, यसको लागि निजी डाटा प्रस्ताव नगरी। आउनुहोस् उबुन्टु वन के गर्न सुसे.
होस्ट गर्न सक्नुहुन्छ ownCloud या त तपाईंको आफ्नै सर्वरमा वा भाँडा सर्वरमा। दुर्भाग्यवस यसले बनाउँछ ownCloud बिभिन्न कारणका लागि थोरै जटिल, र यो त्यहि आउँछ मिराल.
मिराल एक ग्राहक प्रस्ताव गर्दछ जुन systray मा बस्छ र तपाईंलाई स्थापना गर्न, कन्फिगर गर्न र एक घटना सुरू गर्न अनुमति दिँदछ ownCloud तपाईको आफ्नै कम्प्युटरमा वा भाँडामा वेब स्थानमा, केहि क्लिकहरू। पछि, मिरालले सुनिश्चित गर्दछ कि फाईलहरू राम्रोसँग सिंक भएको छ।
सक्छ यहाँ पढ्नुहोस् रिलिज नोटहरू वा यसलाई डाउनलोड गर्नुहोस् यो लिङ्क.
विशेष गरी मलाई यो वितरण मनपर्दैन। अघिल्ला संस्करणहरू जुन म प्रयास गर्न सक्षम छु, मैले डेस्कटप प्रयोगकर्ताका लागि धेरै ढिलो महसुस गरें, यद्यपि मैले यो पहिचान गर्न छोड्दिन। यास्ट २ यो एक शक्तिशाली उपकरण हो। तर केहि पनि छैन, मलाई लाग्छ कि यो डिस्ट्रोका प्रयोगकर्ताहरू भाग्यमा छन् ..
लेखको पूर्ण मार्ग: लिनक्सबाट » वितरण » ओपनसूस १२.१ उपलब्ध
र पक्कै पनि तपाइँ उबुन्टु मन पराउनुहुन्छ जुन डेस्कटप प्रयोगकर्ताहरूका लागि "उड्छ"
उइ, तिमी ठिकै छौ। ठिक होईन, मलाई डेबियन मन पर्छ कि "यदि यो उड्यो भने"। यसलाई व्यक्तिगत रूपमा नलिनुहोस्, मैले ओपनसूस संग मेरो अनुभवको आधारमा केवल आफ्नो राय दिएँ।
मँ तपाईको पेपेले यहाँ सम्म छोडेको छ, तपाईं बलहरू आमन्त्रित गर्दै हुनुहुन्छ कि तपाईं हेह लाई ह्यान्डल गर्न सक्षम हुनुहुने छैन। अर्कोतर्फ, म यो डिस्ट्रो गर्न को लागी सधैं उत्सुक छु, यदि मैले यसलाई र सबै कुरा डाउनलोड गर्ने आँट गरेँ भने मँ अधिक जान्ने छु।
बुद्धिमान् शब्दहरू ... फोर्स तपाईसँग हुन V_V
मेरो बाँकी रहेको मध्ये उबुन्टु ११.१०, फेडोरा १ 11.10 र अब, ओपनस्युज १२.१ को प्रयास गर्नु हो। हेरौं कुन मँ पहिले प्रोत्साहित गर्छु, हे
र राम्रोसँग, मैले धेरै संस्करणहरूको खुलासाएँ (अन्तिम ११:११ थियो) र मैले प्रणाली सुरूवात बाहेक "ढिलो" महसुस गरेको छैन; जुन मैले पढें, यस नयाँ संस्करणमा "systemd" को साथ धेरै सुधार गरिएको छ।
तेह्रलाई जवाफ दिनुहोस्
हुनसक्छ यो म हुँ र मेरो चीजहरू बुझ्ने मेरो तरिका हो, तर कम्तिमा जीनोम २ को साथ, म ओपनसूसँग कहिले पनि सजिलो भएन। म गर्न सक्दिनको रूपमा धीमा र समय-समयमा यो अडिग रह्यो।
तपाईं यसलाई टाँस्नका लागि केहि गर्नुहुन्छ?
केहि पनि होईन। केवल यसलाई प्रयोग गर्नुहोस्। केडीई 4.7 प्रवाहित नभएको बनाउन तपाईले के गर्नुभयो?
यो उस्तै छैन, केडीईसँग केही आवश्यकताहरू छन् (यदि कम्प्युटरले ती पूरा गर्दैन भने, यो सजिलैसँग जान सक्दैन) र OpenSUSE एक डिस्ट्रो हो, Winbuntu बाट हटाउँदा धेरै जसो डिस्ट्रोकहरू लक हुँदैन जबसम्म हामीले केहि गर्दैनौं।
मलाई धेरै शंका छ कि Winbuntu एक पुरानो हो। अन्यथा मलाई लाग्छ कि यो पहिलो पटक हो कि तपाईं ओपनसूसुको बारेमा कुरा गर्नुहुन्छ
ओपनससको बारेमा कुरा गर्दै मैले भर्खर एउटा नेटबुकमा स्थापना गरें। र सुरुमा यदि यसले केही प्रकारको असुविधा प्रदान गर्‍यो तर सबै समाधान भयो र अब म ओपनसिस १२ लाई पूर्ण रूपमा विश्वस्त छु… !!
उबुन्टु यसलाई डेस्कटप पीसीमा मात्र प्रयोग गर्दछ।
तेजादालाई जवाफ दिनुहोस्
मिराज: सुन्दर र लाइटवेट छवि दर्शक
प्रतियोगिता: केडीई 4.8 वालपेपर सिर्जना गर्नुहोस्